:: My Little World ::: စိတ်ကြိုက်
Posted by Nay Nay Naing at 12/21/2008 01:07:00 AM
အာလူးကြော်တွေ အရမ်းစားရင် ၀တယ်ဆိုတာ ယုံပါ။ ဆီတွေဝနေအောင်ကြော်ထားတဲ့ အာလူးအချောင်းကြော် ဆိုပိုဆိုးသေး။ စားလို့လည်းသိပ်ကောင်းပေါ့။
သဘာဝအတိုင်း ကြော်ထားတဲ့ မြန်မာပြည်က အာလူးကြော်ကို လွမ်းတာချင်း တူနေပြီ ညီမရေ။ အရသာ ထွေလီကာလီတွေ လျှောက်ထွင်ထားတာတွေကို ခံတွင်း မတွေ့ပါဘူး။ မြန်မာပြည်ကနေ လွယ်လွယ်ကူကူ မှာစားလို့ ရနေတာ ကံကောင်းလိုက်တာ၊ အားကျတယ်။ ငယ်သေးတဲ့လူတွေမှာ metabolism က မြန်နေသေးတော့ အာလူးတွေ ဆီကြော်တွေ စားပေမယ့် မ၀ဘူးပေါ့။ စားနိုင်တုံး စားသာစားး)
Sunday, December 21, 2008 3:42:00 AM
Hi Friend, I also like potato chip from myanmar especially from Pin Ta Ya. I miss that now. :(
မီယာ >> ကျွန်မတော့ အခု အချိန်အထိ မ၀သေးဘူး။ နောက်ကြီးလာရင်တော့ ၀ မလားမသိဘူး။
မနုသွယ် >> ဟုတ်တယ်။ အရင်က တောင် အစားအသောက် ဟိုမစား ဒီမစား အရမ်းလုပ်တာ။ အခုတော့ ငယ်တုန်း စားနိုင်တုန်း စားရတာ၊ စားမှဆိုပြီး စားတယ်။
VET >> ပင်းတယ က အားလူးကြော် မစားဖူးဘူး။ စားလို့ ကောင်းလား။ မြန်မာပြည် အလယ်ပိုင်း မြို့ တွေက အားလူးကြော်တွေတော့ စားဖူးတယ်။ ဖေဖေ သူငယ်ချင်းတွေက သူတို့ရန်ကုန်လာတိုင်း ယူလာပေးတယ်။ မြို့ နာမည်တွေ စဉ်းစားတာ စဉ်းစားမရဘူး။ မေ့နေတယ်။